Kallacha Walabummaa Oromiya/KWO Front for Independence of Oromia/FIO | Oromia Shall be Free
Kallacha Walabummaa Oromiya/KWO Front for Independence of Oromia/FIO
bilisummaa August 9, 2016	Comments Off on Kallacha Walabummaa Oromiya/KWO Front for Independence of Oromia/FIO
Hagayya 4, 2016 August 4, 2016
Ibsa ijjannoo miseensota Kora KWO Kutaa USA fi Kanada
Kallachi walabummaa Oromiyaa kora kutaa USA fi Canadaa Hagayya 2016 magaalaa lakkuu
(Minneapolis fi St. Paul) keessatti godhate, injifannoon xuumuratee jira. Miseensonni kora kana
irratti argaman, milkii fi gufuulee adeemsa waggaa tokkoffaa keesatti KWO qunnaman erga
xiinxalaniin booda ibsa ejjannoo armaan gadii dabarfatanii jiran.
1. Sirni gita bittuu saba tigree dhaloota lafaa dhufaa Oromoo, daa’imaa fi manguddoo, qeerroo
fi dubartii ulfaa gara nyaattoo tokko malee qe’ee isaanii irratti rasaasa itti roobsuun yakka
sanyii duguugiinsaa ifatti raawwataa jira. Kallachi Walabummaa Oromiyaa, gocha murna
koloneeffattuu kana hadheeffatee balaaleffata. Miseensonni KWOtillee humnaa fi dandeetti
qabnu maraan, ummata keenna cinaa dhaabannee, warraqsa walabummaaf godhamu
finiisuuf, murannee kaanee jirra.
2. Hirmaannaa barattoonni, qotee bultoonni, daldaltoonni, shamarran, dargaggoonni,
haawwanii fi daa’imman Oromo; guutummatti ummanni Oromoo biyya keessaa qabsoo
walabumma Oromiyaatii fi bilisummaa ilman Oromo gara fuula duraatti shaffisissuuf
godhaa jiru dinqisiifachaa, nutillee gama keennaan dirqama nurraa eegamu bayuuf qophii
ta’uu keenna jabbesinne mirkannessina
3. Kaayoon masakaa Kallacha Walabummaa Oromiyaa, impaayera Tophiyaa sirna kolonii
irratti ijaarame hundeen buqqisee, Oromiya walabaa, ta ummanni Oromo bilisaan keessa
jiraatu deebisee utubuudha. Qabsoo fuula maraan ilmaan Oromoo kaayoo tana milkeessuuf
godhan bakkaan gayuuf miseensonni hundi ciminnaa fi dammaqinnaan hojjachuuf waada
keenna haarawoomsinee jirra.
4. Ummanni Oromoo Seenaa keessati marsaa heddu diinaan durfamee carraa ofiin of-
bulchuu fi hiree abbaa biyyummaa isaa itti gonfachuu danda’u dhabee jira. Barri 1991/92
yaadannoo yeroo gabaabaati. Hennaa ammaallee carraan walfakkaataan dhufee balbala
qabsoo walabummaa Oromiyaatii fi bilisummaa Oromoo dura dhaabataa jira. Carraa
kanatti fayyadamuuf yoomuu caalaa cimsinee hojjachuuf waadaa seenna.
5. Mirgi hiree ufii, ufiin murteefachuu ummata Oromoo iggiitii tokko malee akka
raawwatammuuf qabsoo hadhooftuu godhuun barbachiisa akka ta’e hubbanne
waldhaansoo keenna daran cimsinee itti sufna.
6. Qabsoon hadhooftuun ummanni keennaa woggoota dheeraaf godhee, woreegama lubbuu
goota kumaatamaan laakkayamu itti gabbaree fi adhallee gabbaraa jiru, walabummaa
Oromiyaatiin guduunfama. Waan walabummaa gadii takkallee hin-fudhannu.
7. Sirni koloneeffattaa, aadaanii fi amalli isaanii, kan nagayatti amanu uduu hintaane, sirna
qawweetti irkatee ijaaramee fi funyaan qawweettiin biyya abbaa keennaa nudhaalee
abbaa itti ta’ee, nu gabroomfate. Sirni qawween dhufe, qawween kufa. Kanaafuu, ummanni
Oromollee kana beekee, karaa danda’e hundaan hidhannoo ufii qixxeeffattee, falma KWOn
dirree woraanaa irratti godhu cinaa akka dhaabatu waamicha lamummaa dabarfanna.
8. Tokkummaan qabsoo ilmaan Oromoo dhabaa keenna Kallacha Walabummaa Oromiyaa
biratti, wirtuu geejjiba waldhaansoo dandii qajeeltu irra hiriirsuun injifannottiin
nudhaqaati. Kanaafuu, walii galteen tokkummaa dhaabota siyaasaa Oromo walaba ta’an
jiddutti godhamaa jiru, dhawaa fi mala waarroo walabummaa ta’uu hubannee bakkaan
gayuuf onnee guutuun hojjanna.
9. Waliigaltee dhaabota gita bittuu, sirna dullachaa waliin godhamu hunda jabeessinnee afoo
dhaabanna. Tokkummaa saboota humnaan ukkaamfamanii qabeenna impaayera Tophiyaa
godhamanii dararaan sirna cunqursituu habashaa akkuma ummata Oromoo irratti
raawwatamaa ture waliin uumachuuf halkanii fi guyyaa hojjanna.
10. Walabummaan fedhii fi hawwii qofaan hindhuftu. Wareegama heeddu gafaati. Nuti
missensooni Kallacha Walabummaa Oromiyaa, waregama bifa hundaatuu kafaaluuf qophii.
Ummanni Oromoollee kana beekee dhaaba isaa Kallacha Walaabumma Oromiyaa waliin
akka dhabatu gafaana.
Oromiyaan ni walabomtti!
Kallacha Walabumma Oromiyaa/KWO/
Hagayya bara 2016
Previous Ethiopia: Dozens killed as police use excessive force against peaceful protesters
Next Nuti nagaya feenaaf Nagayaan himannee Saniinis dadhabnee, Jumlaan ajjeefamnee Jarri nagaya hin feetu Agarree hubannee Tarkaanfii itti aanuuf Murannoon qophooyne.